As of Sat, 30 May, 2020 11:15
सांसदहरुले सरकारी कार्यालयमा काम गरेको योग्यतालाई आधार मानेर बिमा प्राधिकरणको सञ्चालम समितिमा नियुक्ति दिने प्रावधान हटाउन पर्ने माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको दफाबार छलफलको क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्रधान कार्यालयकोे आयोजनामा काठमाडौंमा शनिबार शाखा कार्यालयहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
सिटिजन लाइफको ‘एमडीआरटी’ कार्यक्रम
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले काठमाडौंमा मिलियन डलर राउन्ड टेबल ‘एमडीआरटी’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सिटिजन लिडरहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने तथा ग्राहकहरू माझ सेवालाई स्तरीय बनाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै कम्पनीले उक्त कार्यक्रममा ४ सयभन्दा बडी सक्रिय सिटिजन लिडरहरूको उपस्थिति रहेको जनाएको छ ।
बिमाको एकीकृत नियमनका लागी नयाँ ऐनः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा क्षेत्रको एकीकृत नियमनका लागि नयाँ बिमा ऐन ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५ बारे बुधबार अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय बिमा संस्थान र बिमा समिति ऐनलाई खारेज गर्दै बिमा प्राधिकरण ऐन अघि सारिएको जानकारी दिए । विधेयकमा बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि बिमा प्राधिकरण बनाउन लागिएको र यसमार्फत बिमाको नियमन प्रभावकारी हुने समेत उनले दावी गरे ।
जीवनले १५ र निर्जीवनले ३६ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने
बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ । बिमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन–२०७६ जारी गर्दै जीवन बिमा कम्पनीहरूले १५ र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३६ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो । बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक झमेला गरेको र लामो समय लगाउने गरेको गुनासो बढेसँगै समितिले भुक्तानी दिनका लागि समयसीमा तोकेको हो । योसँगै अब बिमाको दाबी भुक्तानी लिन छिटो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री र बिमा समितिका अध्यक्षबीचको विवादले रोकिएको बिमा विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ । २०७५ मंसिरमै अर्थ समितिको बैठकमा प्रवेश पाएको बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथी सोमबारबाट पुनः छलफल सुरु भएको हो । सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अरु विधेयक प्राथमिकतामा परेकाले बिमा विधेयक एक वर्षदेखि रोकिएको बताए । तर, विधेयकको व्यवस्थाअनुसार नयाँ बन्ने बिमा प्राधिकरणका पदाधिकारीको विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंबीच मत बाँझिदा छलफल स्थगित भएको थियो ।
बिमा कम्पनीहरुले अधिकत १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा लेख जारी गर्न पाउने भएका छन् । बिमा समितिले लघुविमा निर्देशिका—२०७६ जारी गर्दै लघुबिमाको बिमांक रकम र दायरा समेत वृद्धि गरेको हो । निर्देशिका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जा र सरकारले व्याज अनुदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहुलियत कर्जालाई समेत लघुबिमाले समेट्ने गरी बिमांक रकम र क्षेत्र बढाएको हो ।
नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री नवराज रावतले स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गर्न आउने सेवाग्राहीलाई भेदभाव नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको १४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री रावतले बिमामार्फत उपचार गराउन आउने सेवाग्राहीलाई अस्पतालहरूले राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो सुनेको भन्दै विभेद नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
पर्वतमा सामाजिक न्यायमा आधारित स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । नेपाली नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले थालेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पर्वतमा सोमबारदेखि सुरु भएको छ ।
गायिका तथा लोकप्रिय टेलिभिजन शो नेपाल आइडलकी जज इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । काठमाडौंको होटल -याडिसनमा उनले कम्पनीसँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै यसमा आबद्ध भएकी हुन् ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेड (एलआईसी )को पोखराको तालचोकमा शाखा सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीको ७१ औं शाखाका रूपमा साविक लेखनाथको तालचोकमा स्थापना गरिएको कार्यालय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलपी दाँसले शुक्रबार एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स तथा सिप्रदी टे«डिङ प्रालिबीचमा बिमितहरूलाई नगदरहित सवारी साधन मर्मत–सम्भार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आइतबार काठमाडौंमा ‘स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड मोटिभेसन प्रोग्राम’ भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । उक्त भव्य कार्यक्रम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विवेक झाले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए । आफ्ना अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त भव्य कार्यक्रममा १ हजार ५ सयभन्दा बढी सक्रिय अभिकर्ताहरूको उपस्थिति थियो ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा शिविरमार्फत सप्तरीमा हालसम्म एक हजारभन्दा बढी छोरी बीमित भएका छन् । विसं २०७५ माघ १ गतेयता जन्मिएको छोरीलाई प्रदेश सरकारले शिक्षा बिमा गरी दिने घोषणा गरको थियो । सोहीअनुरुप मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै अभियान सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि विगत एक वर्षमा जन्मिएका सबै छोरीको बिमा गर्ने उद्देश्यका साथ शिविरमार्फत हालसम्म एक हजार १२ छोरीले बिमा गराएका हुन् ।